Drive ကို freeze လုပ်ထားမယ် — MYSTERY ZILLION
Drive ကို freeze လုပ်ထားမယ်
software လေး တစ်ခုပါ .ကိုယ့် computer ကို တခြားသူ တွေ ကိုယ့် ခွင့်ပြုချက်မရဘဲ software တွေ install မလုပ်နိုင်ဖို့ နဲ့ virus ပြသနာ က ကာကွယ်နိုင်ဘို့ deepfreeze ဆိုတဲ့ software လေးနဲ့ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်. software ကို တင်ပြီးfreeze လုပ်မဲ့ drive ကို ရွေးပြီ တာနဲ reset ချလိုက်ရင် အဲဒီdrive က freeze ဖြစ်သွားပါပြီ. သူ ကို ctrl+alt+shift+f6 နိပ်ပြီး ခဏ ရပ်ခိုင်းလို့ ရပါတယ်
ဒီနေရာက ဒေါင်းပါ http://w1.uploadmb.com/dw.php?id=1217445042
ctrl+alt+shift+f6 တွဲနှိ်ပ်ပြီးခဏရပ်တာ ဘယ်လောက်ကြာကြာရပ်လဲ။ ရပ်နေတဲ့ အချိန်မှာ အင်စတောလုပ်လို့ရလား။ ရပ်ပြီးရင် ပြန်စပေးဖို့လိုလား။ စမ်းပြီးပြောပေးပါဦး။ သုံးချင်လို့.။ ပြီးတော့ free version လား။ မဟုတ်ရင် serial လေး၊ crack လေးပါထည့်ပေးပါ။